Moggaasi olitt kaa’ame, agarsiisa bara 1974 ayyaana carraan warraaqsa Oromo argamsiiseen, ogneesoti Oromo ABOn lafa jalaa, godinaa adda addaa qindeessee yabboo tokko irratt walitt fide kan itt dhagahamaa ture ifsatani. Akka aadaa Oromoott dhaamsa guddaa of keessaa qaba. Qabama keessa waggaa dhibbaa ol turanii qotee bulooti caalaan saanii Oromoo tahan akka tasaa finnaa empayerichaa hundee raasan. Haalicha tasgabbeessuuf abbaawummaa kan fudhate raayyaa Imperiyaalii yeroo uumamee jalqabee empayericha tajaajila ture. Jalqaba irratt inni kan uumameef sana utuu hin tahin akka leellisaa ummatootaatt of dhiheesse. Ogineesitooti garuu irbuu seeneen ni hafa amantee jedhu hin qaban turan. Kanaaf ummati saanii sochii godhu of eeggannoon akka gaggeeffatu hubachiisan. Gorsi sun hardhallee dhimma ni baasaa. Giti finqilfame akka bacarraa keessaa darbatamett deebi’u kakataa bahe. Amma dhukaasii asii fi achi naannaa daangaa Habashaatt godhaa jiru qaata gurguddoo Oromoo hanga tokko kanneen waan dhibdee naannaa ilaalutt eessa akka ijaajjan hin murteeffanne raajeffachiisuutt kaheraa. Isa qeeyee keessaaf gurri sanii duudaa dha. Ummati Oromoo garuu akka itt tolutt milla fuudha. Haalli keessaa fi alaa hin daalife malee hin bilchannee, kanaaf waan isa xarfu hin qabu. Gaafa sirriitt bilchaate waliin ka’e kan isa dhaabuu dandahu hin jiraatu. Kanaaf moggaasa barruu kanaa “... Suuta” jedhu ammayyuu dhimma baasa kan jedhamuuf.